Isi obodo nke Middle East | Akụkọ Njem
Mariela Carril | | Nduzi, njem
Middle East. Mpaghara ụwa a anọwo na akụkọ akụkọ oge niile n'okpuru afọ iri ise. Otu n'ihi na ọ bụ mpaghara jupụtara na mmanụ, mana kpọmkwem n'ihi nke a, esemokwu ndọrọ ndọrọ na-apụta otu ọzọ.
Ọzọkwa, ọ bụ mpaghara dị mkpa n'akụkọ ihe mere eme mmadụ na ọtụtụ n’ime obodo-ukwu ya nile dị ọtụtụ puku afọ. O di nwute na nsogbu nke geopolitical na eme ka otutu n'ime ha ghara ileta, ma anyi nwere olile anya na udo na-abiakwute ha otu ubochi ma anyi nwere obi uto. Ka ọ dịgodị, mụta banyere ụfọdụ n'ime isi obodo nke Middle East ebe a
2 Isi obodo Middle East
Ọ na-eji aha dị iche iche, Middle East, Middle East, Middle East, na ọbụna West Asia. Ọ bụ obosara mpaghara na enye odu ke ufọt Inyan̄ibom India ye inyan̄ Mediterranean onye onu ogugu ya, ma ewepu mmadu ole na ole, bu ndi Islam. Ke adianade do, ọ ụtụtụ mmanụ kachasị mkpa n'ụwa ya mere kemgbe narị afọ nke iri abụọ ọ dịla na anya nke oke ifufe, yabụ ikwu okwu.
Ajuju a na-achotaghi banyere mba ndi mebere Middle East na ndi n’emeghi ma obu akuku, ma a nabatara na n’ozuzu ha bu Mba 17 n'ime mpaghara a. Ndị a gụnyere Saudi Arabia, United Arab Emirates, Israel, Iran, Iran, Jordan, Lebanon, Oman, Kuwait, Qatar, Syria, Yemen, Palestian Territories, Egypt, Cyprus na Turkey.
Anyị nwere ike ịmalite site n'isi obodo nke mba nwere ike ịga leta. Iji maa atụ, UAE, Saudi Arabia, Israel, Turkey, Jordan, Lebanon, Qatar, Cyprus, ma ọ bụ Egypt. Ka anyị buru ụzọ lee anya na Riyad, isi obodo Saudi Arabia.
Riyad bụ isi obodo na obodo kachasị nwee ego nke Saudi Arabia. Ọ dị n'etiti ala Arabian ma ọ bụ ezie na ọ nwere ọtụtụ narị afọ nke akụkọ ntolite nhazi ya ka ọ malitere na 40 Narị afọ nke XNUMX site n'aka Shah Saud, nke sitere na obodo ndị America. N'ihi ya, e degharịrị ya dị ka okporo nke agbata obi, n'okporo ámá na ụzọ ma ọnụ ọgụgụ ndị mmadụ wee na-eto na-aga n'ihu mgbe nke ahụ gasịrị.
Afọ 90 adịbeghị jụụ na mpaghara ahụ ma ọ bụghị na Riyadh ebe enwere ndị na-eyi ọha egwu n'ebe ndị obodo na ndị mba ọzọ nọ, nke ikpeazụ n'akụkụ nke Al Qaeda na Yemen, nke nwere obodo ahụ na nlele nke ngwa agha ya. O doro anya na ọnọdụ ahụ anaghị akpọ oku maka njem ma enwere ndị na-atụgharị anya mgbe niile ...
Ihu igwe na-efekarị ma na-ekpo ọkụ ya mere n'oge ọkọchị, okpomọkụ dị oke ma na-agafe 40 ºC. Ọ bụrụ na ị kpebie ịga leta gị nwere ike vgaa na obodo ochie N'ime mgbidi ahụ, ọ bụ obere akụkụ mana ebe ị nwere ike ịmatara Riad ochie.
Bụ ebe a na- Fort Masmak, nke ụrọ na apịtị nke nwere ụlọ elu na mgbidi ndị siri ike. ụlọ ochie, ndị Obí Murabba Site na 30s nke narị afọ nke XNUMX, buru ibu, ma ị nwere ike ịga njem mgbe niile na obodo ndị gbara ya gburugburu. Nwere ike ịgbakwunye otu nleta National Museum nke Saudi Arabia na Royal Saudi Air Force Museum.
Abu Dhabi bụ isi obodo United Arab Emirates na ọnụ ọgụgụ ndị bi na ya bụ azụ Dubai. Ọ nọ n'àgwàetiti yiri nke mkpụrụ akwụkwọ T na Ọwara Oké Osimiri Peasia. igwe, Ọ na-ezo aka na mgbada nke bi n'ógbè a bara ọgaranya maka ọtụtụ mmepeanya. Ebe a enwere ihe ọdịnala oge ochie ya mere, ọ bụ ihe ochie na ihe ịtụnanya. Tupu nchọpụta na nrigbu mmanụ, Abu Dhabi nọ na-ere ahịa pel.
Ọ bụkwa obodo nwere nnukwu udu mmiri ma ọ bụrụ na ị nwere ike izere ya adịghị aga n'etiti June na September. Ọnwa kachasị mma sitere na Nọvemba rue Machị. Mgbe ahụ ị pụrụ ịga nke ọma karịa site na ya center na skyscraper, kporie ya pier ma ọ bụ ogige ya, gụnyere Ogige ntụrụndụ ma ọ bụ Ogige Ihe Nketa. Ga-ahụkwa nnukwu na ebube Sheik Zayed White ụlọ alakụba ma ọ bụ ị nwere ike ịga na Abu Dhabi Louvre ma ọ bụ Ferrari ụwa.
Amman bụ isi obodo Jọdan na mgbọrọgwụ ya laghachiri Neolithic. Ọ bụ obodo nke ise ndị Arab na-agakarị nwere ọtụtụ ihe ndị mgbe ochie site n'oge dị iche iche dịka ndị Grik na ndị Rom jegharịrị ebe a.
Enwere ọtụtụ akụkọ ihe mere eme na Ebe ngosi ihe mgbe ochie nke Jordan, ọ bụrụ na ị chọrọ ịmata banyere ama akwụkwọ mpịakọta nwụrụ anwụ, Ebe Ndebe Ihe Ochie, Royal Automobile Museum na Museum Museum.
Doha bụ isi obodo Qatar n'oge na-adịghị anya, anyị ga-amatakwu banyere ya n'ihi na ọ ga-abụ otu n'ime ebe a ga-anọ agba bọọlụ ụwa ọzọ. Nke a n'ụsọ Oké Osimiri Peshia ọ bụkwa ya kacha mkpa n’obodo. Ọ e tọrọ ntọala ke akpa ọkara nke narị afọ nke XNUMX na ọ bụ isi obodo kemgbe 1971 mgbe Qatar jisiri ike kwụsị ịbụ onye nchebe Britain.
O nweela ọtụtụ ala site n'oké osimiri ma nwee ọkụ dị ọkụ ma na mbara ọzara. Ọ bụrụ na-amasị gị ihe ngosi nka ị nwere ike ịga na Lọ ihe ngosi nka nke Islam Art na Arab Museum nke Oge A Art. E nwekwara Fort Al Koot, njem ogologo kilomita asaa, obodo omenala nke Katara na ebe mara mma na ahihia Al Waab Park.
Beirut bụ otu n’ime obodo ndị kacha ochie n’ụwa ọ bikwala n’ime ya ihe karịrị puku afọ ise. Ọ bụ isi obodo Lebanon ma ndi Greek na ndi Rom, ndi Alakụba, Crusaders na Ottomans gabigakwara na ya mgbe emesiri. Ọbụna French mgbe Agha Worldwa Mbụ gasịrị. Ọ bụ obodo na-arụsi ọrụ ike ma bụrụkwa obodo ọdịbendị, ọ bụghị n'efu ka a bịara mara ya "Paris nke Middle East."
Mana ihe niile gwụchara n'afọ ndị 70 mgbe agha obodo, agha Lebanon na-esote, na esemokwu megide Israel. O di nwute na ha ka mma n'ihi na taa obodo a na-agba akaebe na ọgụ na nsogbu akụ na ụba. Ma, ọ bụrụ na ị kpebie ịga leta ya, enwere ọtụtụ ebe na-adọrọ mmasị: akụkọ ihe mere eme na etiti nke Beirut na ogige ntụrụndụ, n'ámá na ebe akụkọ ihe mere eme na mpaghara ndị na-agagharị agafe na njem na ọtụtụ ụlọ ahịa.
Ga-ahụ ọtụtụ ụlọ French na Gothic, ọ bụ ezie na enweghị ụkọ nke ndị Ottoman ọzọ. N'etiti Ndị ụka Crusader na ụlọ alakụba na mkpọmkpọ ebe Rome. A mara mma. Obodo ndị dị ka Jerusalem ma ọ bụ Cairo ka nọ na-arụ, mana anyị ekwuola maka ha n'oge ọzọ. Mgbe ahụ enwere isi obodo ndị ọzọ dị n'Ebe Ọwụwa Anyanwụ likewa dị ka West Bank, Damaskọs, Sana'a ma ọ bụ Muscat nke naanị ndị na-eme njem nlegharị anya ga-achọ ileta taa. Anyị na-ahapụ ha maka ọkwa ọzọ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ Njem » njem » Isi obodo Middle East
Ebe a na-eme njem maka ihunanya